120 ruux oo lagu xiray Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo | Baydhabo Online
120 ruux oo lagu xiray Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo
Booliska Puntland gaar ahaan kuwa ka howlgala Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 120 ruux oo qaarkood lagu eedeeyay inay ku howlanaayeen falalka lidiga ku ah dhanka ammaanka Waqooyiga Gaalkacyo.
Howlgalkaan oo Booliska ay ka sameeyeen Xaafadaha ku yaalo Waqooyiga Magaaladaasi ayaa la sheegay dadka la soo qabtay inay u badnaayeen dhalinyaro kala duwan oo qaarkood guryahooda lagu beegsaday.
Dhamaan dadkii la soo qabtay ayaa waxaa la isugu geeyay Saldhiga Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo Booliska ay ku mashquulsan yihiin kala saarida dadka la soo qabtay.
C/qaadir Faarax Shire Taliye ku xigeenka Qaybta Booliska Gobolka Mudug oo Warbaahinta la hadlay howlgalka kadib ayaa sheegay dadka gacanta lagu haayo Booliska inay sii marsiin doonaan baaritaano dheeri ah.
Wuxuu sheegay in la kala saari doono dadkaasi, kadibna Booliska ay siideyn doonaan cidii aanan dambi laheyn oo Hay’adaha ammaanka ay cadeeyaan.
Magaalada Gaalkacyo maalmahan waxaa ka soconaayay howlgalo qorsheysan oo ciidamada DANAB ay ka sameynayeen Koonfurta Magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo lagu beedsaday Saraakiil ka tirsan Ururka Al Shabaab.
Taliye ku xigeenka ciidamada Booliska Gobolka Mudug ee Puntland ayaa Bulshada ugu baaqay inaysan iska eegin kaliya cadowga banaanka ka imaanaya, balse ay jiraan sida uu yiri cadoow ku sugan gudaha Deeganada Puntland.